च्याङ्ग्रे पोखरीको संरक्षण हुँदै | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
च्याङ्ग्रे पोखरीको संरक्षण हुँदै
- योजनाबद्ध विकासमा गाउँपालिकाको जोड
भोजपुर, ३ पुष २०७८, शनिबार १४:४५
भोजपुर, ३ पुष । पौवादुङमा गाउँपालिकाको आकर्षणको रूपमा रहेको च्याङ्ग्रे पोखरीको संरक्षण थालिएको छ । गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको यो पोखरी स्थानीय सरकार र पर्यटन विकास मन्त्रालयको रु. दुई करोड १२ लाख लागत संरक्षण थालिएको हो । बहुवर्षीय योजनामा समायोजन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर यसको विकास तथा विस्तार भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पोखरीको क्षेत्रफलको विस्तार गर्दै पोखरी परिसरमा पञ्चकन्या मन्दिरको निर्माण गर्ने, पानीबोट सञ्चालनमा ल्याउने, ढलको व्यवस्था गर्ने, बगैँचा निर्माण गर्ने, पानीको उचित व्यवस्थापन तथा सरसफाईसंगै घेराबारा लगाउने लगायतका काम गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले भने,‘अहिले हामीले च्याङ्ग्रे पोखरीको संरक्षण तथा विकासमा लागेका छौँ । यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामीले निर्माण गर्ने योजनामा राखेका पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडी बढाएका छौँ । योजनामा रहेका सबै क्षेत्रको विकासमा गाउँपालिकामा आएको बजेटले नपुग्ने भएकोले प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन देखाएर रकमको माग गरेर बजेटको व्यवस्थापन भइरहेको छ । गाउँपालिकामा आएको रकमले पनि कतिपय कामहरू सुरु भइसकेका छन् । गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रको विकासको लागि गुरु योजना बनाएर काम गर्ने उेद्धश्य भएपनि रकम अभावले मुख्य मुख्य क्षेत्रको छनौट गरेर छुटाछुटै डिपीआर तयार गरेर काम अगाडी बढाएका छौँ। ’
पोखरीको संरक्षण तथा विस्तारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न गराउने गाउँपालिकाको ध्यान रहेको उनले बताए ‘यो हाम्रो मुख्य आकर्षणको केन्द्र हो । यसलाई जिल्लाको नमूना पोखरी बनाउने लक्ष्य छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा भए अनुसार यहाँ विभिन्न खालका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् । निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् यसको प्रचार प्रसारमा लागेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य रोजाइको स्थान बनाउने हाम्रो योजना छ ।’ अध्यक्ष राईले भने, ‘गाउँपालिकाको पर्यटकीयसँगै अन्य क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्धरूपमा लागेका छौँ । तर स्थानीय सरकारलाई आएको बजेटले मात्र योजनामा राखेका काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हप्तौँसम्म प्रदेश र केन्द्र सरकार धाएर भएपनि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । यसले यहाँका जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन सकेका छौँ ।’
नौ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणमा भइरहेको पोखरीको पर्खाल बनाउने, फाउन्डेसन खन्ने लगायतको काम तीव्र गतिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश राईले बताए ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणका लागि ऐतिहासिक महत्त्वलाई कायम राख्दै आधुनिकता झल्कने गरी पोखरीको निर्माण हुने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भने,‘यहाँ निर्माण हुने संरचना ऐतिहासिक महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै आधुनिकता पनि देखिने गरी निर्माण हुनेछन् । पोखरीको छेउमै रहेको पञ्चकन्या पोखरीको पनि निर्माण हुनेछ ।’
त्यस्तै गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको पनि डीपीआर तयार गरेर काम अगाडी बढाउने तयारी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
विद्यालयको पुरानो स्वरूपलाई यथावत् राख्दै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । डीपीआर अनुसार विद्यालयको विभिन्न संरचना निर्माणको लागि एक करोड २७ लाख ५९ हजार लाग्ने प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिए । विद्यालयलाई गाउँपालिकाको नमूना विद्यालयको रूपमा विकास गर्नेसमेत उनले बताए ।
गाउँपालिकाले यसअघि पर्यटकीय क्षेत्र अरुण डाँडा, च्याङग्रे ‘भ्यू’ टावर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मिराराई रंगशाला, सन्तानेश्वर महादेव लगायत क्षेत्रको डिपीआर तयार गरेर प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कतिपय ठाउँमा काम समेत अगाडी बढाइसकेको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले किराँत दुङमाली भाषा संरक्षण मञ्चको पनि डीपीआर तयार गरिसकेको छ ।
च्याङ्ग्रे ‘भ्यू’ टावर निर्माणको लागि रु. ९२ लाख, सन्तानेश्वर मन्दिर निर्माणको लागि रु. दुई करोड सात लाख र अरुणडाँडामा भवन निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माणको लागि रु. चार करोड ५० लाखको लागत बराबरको डिपीआर तयार गरेको हो ।
सदरमुकामबाट क्षेत्रमा अवस्थित यो पोखरीको प्राकृतिक सुन्दरताको दृश्यावलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको आगमन वृद्धि भए पनि बाह्य पर्यटक भने कमै मात्र आउने गरेका छन् ।
परापूर्वकालमा यहाँ च्याङ्ग्रा आएर पोखरीको पानी खाने, पानी खाएर पोखरीमै दिनभर आराम गर्ने भएकाले ‘च्याङ्ग्रे पोखरी’ नामकरण गरिएको स्थानीयवासीको कथन छ । पोखरी बनेदेखि नै पोखरीको पानी जुनसुकै खडेरीमा नसुक्ने स्थानीय बासिन्दा सुनाउँछन् ।
स्थानीय चन्द्रबहादुर खत्रीले भने ‘यो एउटा धार्मिक महत्त्वको प्रसिद्ध पोखरी हो । प्रचार नहुँदा देश विदेशका सबै ठाउँमा चिनिएको छैन । तर यसको संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले काम थालेको छ । पक्कै पनि अब यसले चर्चा पाउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’
च्याङ्ग्रे घुम्न आउने जोकोहीको गन्तव्य नै हो यो पोखरी । विश्राम गर्ने, घुम्न, डुल्ने, तस्बिर लिने, दृश्यावलोकनको भरपुर आनन्द उठाउन आन्तरिक पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन् । विभिन्न पूजाआजामा पोखरीको छेउको पञ्चकन्या मन्दिरमा भक्तालुको ठूलो जमघट हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको पोखरीको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नसके पर्यटन व्यवसायबाटै आर्थिक टेवा पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
स्थानीय लीला सुनारले भने,‘यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र हो । यहाँ विभिन्न समयमा मेला लाग्छ । पोखरीमा बिहान, दिउँसो र साँझ फरक–फरक रङ देख्न सकिन्छ । गाउँपालिकाले यसको संरक्षणमा खेलेको भूमिका स्वागत योग्य छ ।’
पोखरीलाई विशेष आकर्षण दिन आसपासका बस्तीलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्ने, कुलो र ढल निकास गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सम्झना राईले बताइन् । उपाध्यक्ष राईले भनिन्,‘यो पोखरीले हाम्रो ठाउँको पहिचान बोकेको छ । यसको विकास गर्न सके यहाँको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले विकासका लागि जुटेका छौँ ।’
त्यस्तै गाउँपालिकाको अर्को पर्यटकीय स्थल अरुण डाँडाको विकासका लागि काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस स्थानको पनि डिपिआर तयार गरेर काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
योजनाबद्ध विकासमा गाउँपालिकाको जोड
पौवादुङमा गाउँपालिका –१ श्यामशिलामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल अरुण डाँडाको विकास तथा विस्तारमा गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । यहाँ अहिले विभिन्न संरचनाहरू बनिरहेका छन् भने गौतम बुद्ध र महादेवको मूर्ति राख्ने काम सकिएको छ । गाउँपालिकाले सो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर स्थानीयसँगै गाउँपालिकाको आयस्रोतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिकाले चार करोड ५० लाख बरावरको डीपीआर तयार गरेर कामको सुरुवात गरेको हो । गाउँपालिकाले मिराराई रङ्गशालाको डीपीआर तयार गरेर कामको थालनी गरेको छ ।
गाउँपालिकाले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चारढुङ्गे सन्तानेश्वर महादेवस्थान मन्दिरको पनि डीपीआर तयार गरेर कामको थालनी गरेको छ । त्यस्तै वडा नं. ५ सुप्लामा रहेको सो मन्दिरको विकासको लागि दुई करोड ६० लाख बरावरको डीपीआर तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा रहेको धार्मिक स्थलका संरक्षण तथा विकासका लागि डीपीआर तयार गरेर काम गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए । अध्यक्ष राईले भने, ‘हामी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा लागेका छौँ । हाम्रो योजनामा रहेका धेरै संरचनाहरूको काम भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ ।
तरकारी र अण्डामा आत्मनिर्भर
पौवादुङमा गाउँपालिका तरकारी र अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको छ । गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र सुख्खाग्रस्त भएपनि गाउँपालिकाले कृषकलाई प्लाष्टिक पोखरी निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गरेर प्रोत्साहन गरेसंगै गाउँपालिका तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको हो । कृषकले वर्षातको पानीलाई पोखरीमा जम्मा गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाएका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रलाई भौगोलिक आधारमा विभाजन गरेर विभिन्न खाले बालीको पकेट क्षेत्र बनाएर काम गर्ने लक्ष्यका साथ कृषिको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस अघिका आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर कृषकलाई प्रोत्साहन गरेकोले गाउँपालिका अहिले तरकारीमा आत्मनिर्भर रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कृषि शाखा प्रमुख बर्तेन्द्र राईले भने ‘हामीले प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेकोले अहिले हामी तरकारी तथा अण्डामा आत्मनिर्भर भएका छौँ । अहिले यहाँ उत्पादन भएको तरकार छिमेकी स्थानीयतहमा समेत विक्रीका लागि जाने गरेको छ । धेरै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र भएपनि कृषकलाई प्लाष्टिक पोखरी निर्माणमा प्रोत्साहन गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाएका छौ ।’
गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रभित्र पर्ने वडा –४ बास्तीम, वडा –६ ठुलोदुम्मा, वडा–५ सानोदुम्मामा कृषकले अकबरे खुसार्नी, टमार, बोडी, बन्दा, काउली लगायतको व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेका छन् । त्यस्तै गाउँपालिकामा व्यावसायिक कुखुरापालन, बाख्रापालन, मौरीपालनमा लाग्ने कृषकको संख्या पनि धेरै रहेको छ । विगतका दिनमा बाहिरी जिल्लामा उत्पादन भएको अण्डामा निर्भर रहँदै आएको गाउँपालिका अहिले आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको अण्डा अन्य ठाउँमा पठाउन थालेको छ ।
स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको अण्डाको बजारीकरणमा समेत गाउँपालिकाले सहयोग सहयोग गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले नियमित रूपमा गर्भजाँच गराउने गर्भवती महिलालाई एक पटक गर्भजाँच गराए बापत एक क्यारेट अण्डा दिँदै आएको जनाएको छ । यसले पनि व्यवसायीलाई अण्डा बिक्री गर्न थप सहजता थपिएको छ । गाउँपालिकाले व्यवसाय सञ्चालनमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि व्यवसायीहरू निकै उत्साहित छन् । उत्पादन भएको अण्डाले गाउँपालिकासँगै भोजपुरलाई नै पुग्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । गाउँपालिका सञ्चालनमा आयसँगै व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन मिलेको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
पोखरीको संरक्षण हुँदै